को कस्तो रणनीतिमा ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
को कस्तो रणनीतिमा ?
स्वेच्छाचारी कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने तयारीमा रहेका असन्तुष्ट नेताहरूलाई ओलीले आइतबार दिएको अभिव्यक्तिबाट थप मसला मिलेको छ । उनीहरू सरकार हटाउने चलखेल कहाँ, कसरी भयो, त्यसको जवाफ माग्ने तयारीमा छन् ।
असार १६, २०७७ बिनु सुवेदी
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई हटाउन भारतसहितका शक्ति लागिपरेको र त्यसमा नेपालका नेताहरूको समेत साथ रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि आफ्नै पार्टीभित्र झन् अप्ठेरोमा परेका छन् । स्वेच्छाचारी कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने तयारीमा रहेका असन्तुष्ट नेताहरूलाई ओलीले आइतबार मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिबाट थप मसला मिलेको छ ।
तीन दिन स्थगनपछि मंगलबार बस्ने बैठकमा असन्तुष्ट नेताहरू सरकार हटाउने चलखेल कहाँ, कसरी भयो, त्यसको जवाफ माग्ने तयारीमा छन् । भारत सरकार हटाउन लागिपरेको र नेपालकै नेताहरूको पनि साथ रहेको भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राख्ने भएका छन् । ‘हामीले अब कूटनीतिक तवरबाट भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीजीको जुन कुरा बाहिर आएको छ, त्यो ठीक होइन,’ स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले भने, ‘उहाँले यसबारेमा पनि पार्टी कमिटीलाई जानकारी दिनुपर्छ ।’
ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा आफूलाई कमजोर ठानेको भए पनि संसदीय दलमाथि भने भरोसा गरेका छन् । उनले यसको संकेत आइतबार मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममार्फत पनि गरेका छन् । संसदीय दलमाथिको यही भरोसाकै आधारमा ओली आफ्नै पक्षीय नेताहरूको समेत सुझाव मान्न तयार नदेखिएको नेताहरूको बुझाइ छ । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई अहंकार त्यागेर अर्का अध्यक्षसँग सहमति गर्नुपर्छ भनेर सुझाएका पनि हौं,’ ओलीनिकट एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर उहाँ त्यसका लागि तयार देखिनुभएको छैन, यसले संकट झन् गहिरिन्छ कि जस्तो छ ।’
यही शैलीमा नै पार्टी महाधिवेशन र सरकार सञ्चालनको बाँकी साढे २ वर्ष धान्ने ओलीको मनस्थिति देखिएको उनीनिकट नेताहरूको भनाइ छ । ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि अहिले उनलाई सरकार र पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटा पदबाट हटाउन सम्भव नभएको तर्क गर्छन् । ‘यो बेला पार्टीका दुई अध्यक्ष मिल्नुबाहेक अर्काे विकल्प छैन, अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भूमिका कम गर्ने र अर्का अध्यक्षले सरकार सञ्चालनमा भूमिका नखोज्ने गर्दा नमिल्ने कुरा केही छैन,’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक पद रोज्ने, एक पद छोड्ने भन्ने कुरा सगरमाथा चढ्नभन्दा कठिन छ, पार्टीको आन्तरिक समस्या समाधान गर्न जनताको मतलाई उपेक्षा गर्न हुन्न ।’
तर प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष पद छोडिहाल्लान् भन्ने विश्वासचाहिँ दाहाल पक्षधर नेताहरूलाई छैन । त्यसैले उनीहरूले अर्काे विकल्प पनि तयार पारेका बसेका छन् । त्यसको संकेतस्वरूप उनले स्थायी कमिटी बैठकको सुरुमै ‘मंसिर ४ मा आलोपालो सरकार सञ्चालनको पूर्ववर्ती सहमतिबाट पछि हटेर कतै गल्ती त गरिनँ,’ भनिसकेका छन् । ओलीले अध्यक्ष छोड्न स्वीकार गरेनन् भने दाहालले पूर्ववर्ती सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व आफूले गर्नुपर्ने अडान अघि सार्नेछन् । ‘कार्यकारी अध्यक्ष भनेर कमरेड प्रचण्डलाई जसरी आइसोलेसनमा राखियो, त्यसले प्रधानमन्त्रीको नियत स्पष्ट भइसक्यो,’ दाहालनिकट ती नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब सहमति हातहातै हुन्छ, एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी होइन, एक व्यक्ति एक पदमा जानुपर्छ, त्यसमा प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभएन भने मंसिर ४ को समझदारी भंग हुन्छ, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।’
यसो भयो भने दाहालको कार्यकारी भूमिकाबारे थप व्याख्या हुनेछ र अध्यक्षद्वयको समीकरण बन्नेछ । यो समझदारी जुटाउन दाहालनिकट केही नेताहरू र स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका मन्त्रीहरू सक्रिय छन् । बरु मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय हेरफेर गरेर चुस्तदुरुस्त बनाउने तर प्रधानमन्त्री नै चाहिँ फेर्न नहुने उनीहरूको तर्कमा अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्य सहमत देखिन्नन् । त्यसैले स्थायी कमिटीको यो बैठकले नेकपालाई कतातिर लैजान्छ, निश्चित भइसकेको छैन । ‘बैठक उद्घाटनबाटै नेताहरूको मन नमिलेको प्रस्ट भइसकेको छ,’ नेता पौडेलले भने, ‘नमिली नमिली सुरु भएको बैठक कसरी सकिन्छ, ठेगान छैन ।’ प्रकाशित : असार १६, २०७७ ०७:३६
राजमार्गका होटल खुल्न थाले
सार्वजनिक सवारी नचलेकाले ग्राहक छैनन्, निजी सवारीमा आएकाहरू पस्न रुचाउन्नन्
असार १६, २०७७ हरिहरसिंह राठौर
धादिङ — लकडाउनयता बन्द रहेका पृथ्वी राजमार्ग छेउका होटल/रेस्टुरेन्ट खुल्न थाले पनि ग्राहक नहुँदा सुनसान छन् । राजधानी आउजाउ गर्ने यात्रुले भरिभराउ हुने होटलमा यतिबेला चहलपहल शून्यप्राय: छ । निजी र मालवाहक सवारी चल्न थालेपछि होटल खुल्न थालेका हुन् ।
आँगनमा सवारी पार्किङ गर्न नदिन डोरी र पर्खालले छेकेका होटल/रेस्टुरेन्ट सञ्चालक अहिले अवरोध हटाएर सफा गर्दै छन् । कोही तीन महिनासम्म आँगनमा हुर्किएका झारपात उखेल्न व्यस्त छन् । कोही भने चोटाकोठामा लागेको माकुराको जालो हटाउन व्यस्त देखिन्छन् । मुग्लिङदेखि नौबिसेसम्म करिब १४ सय सानाठूला होटल सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ ।
पृथ्वी राजमार्गको मलेखुस्थित माछा बजार खुलिसकेको छ । सेल, पकौडा, आलुचप बनाएर व्यवसायी ग्राहक कुरेर बसे पनि यात्रु होटलमा छिर्दैनन् । ‘तराईबाट आउने माछा लकडाउनले पर्याप्त छैन, स्थानीय माछाका परिकार बनाए पनि हतपत होटलमा कोही आउँदैनन्,’ होटल व्यवसायी प्रकाश त्रिपाठीले भने ।
गल्छीदेखि पूर्वका साना खाजा पसल बालुवा बोक्ने टिपर चालकले धानेका छन् । लामो दूरीका सवारी नचलेका कारण अरू होटलले ग्राहक कुरेर मात्रै बस्नुपरेको व्यवसायी बताउँछन् । स्थानीय प्रशासनले होटल सञ्चालन गर्न औपचारिक अनुमति भने दिएको छैन । खोलेका होटललाई पनि प्रहरीले बन्द गर्न कर गरेको छैन । ‘लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी सञ्चालन नभएसम्म होटल लयमा फर्कन सक्दैनन्,’ मलेखुमा होटल चलाइरहेका बोधनाथ दुवाडीले भने, ‘खोलेर मात्रै के गर्नु ? ग्राहक नै आउँदैनन् ।’ विदेशबाट फर्कनेलाई क्वारेन्टाइनमै राख्न तयार भए कोही नआएको होटल व्यवसायी संघ धादिङका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।
प्रकाशित : असार १६, २०७७ ०७:३६